Claw Esports PUBG Mobile အသငျးခေါငျးဆောငျ Ven နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး – Gaming Noodle
Claw Esports PUBG Mobile အသငျးခေါငျးဆောငျ Ven နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး
Gaming Noodle ပရိသတျမြားအားလုံး မင်ျဂလာပါ ခငျဗြာ။ Gaming Noodle ရဲ့ အစီအစဉျသဈတဈခုဖွဈတဲ့ “Gamer Highlight” ကနေ ကွိုဆိုလိုကျရပါတယျ။ Gamer Highlight အစီအစဉျမှာတော့ ပွညျတှငျးပွညျပက နာမညျကွီး Professional Player တှေ, Coach တှေ, အသငျးပိုငျရှငျတှေ၊ Caster နဲ့ Streamer တှကေို တှဆေုံ့မေးမွနျးသှားမယျ့ အစီအစဉျတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယ Episode (2) မှာတော့ Claw Esports ရဲ့ PUBG Mobile အသငျးမှ “Ven” နဲ့ တှဆေုံ့ မေးမွနျးသှားမှာပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ PUBG Mobile ဂိမျး စတငျထှနျးကားကတညျးက နာမညျကွီး ကစားသမားတှနေဲ့သာ ချေါယူတညျဆောကျခဲ့တဲ့ Claw Esports PUBGM ဟာ မကွာသေးမီက Team7 တဈသငျးလုံးကို ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ ထို့အတှကျ Claw Esports PUBGM ရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ အသဈဖွဈတဲ့ “Ven” နဲ့ Gaming Noodle တို့ယခုလို တှဆေုံ့ မေးမွနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
GN: မင်ျဂလာပါ Ven ရေ။ ပထမဆုံး ညီ့ရဲ့ နာမညျရငျးလေး ပွောပွပေးပါဦး။
Ven : ထကျဦးဝယေံပါခငျဗြာ။
GN: ညီ့ရဲ့ အသကျကရော?
GN: လကျရှိ ပညာရေးကရော ဘယျအဆငျ့ထိ ရောကျနပွေီလဲ? တက်ကသိုလျ တကျနတေုနျးလား?
Ven : ကြှနျတျောလကျရှိ ရနျကုနျတက်ကသိုလျမှာ ကှနျပွူတာသိပ်ပံ(တတိယနှဈ)တကျရောကျနပေါတယျ။
GN: PUBG M ကိုဘယျအခြိနျက စတငျ ဆော့ကစားခဲ့တာလဲ?
Ven: ဟိုးအရငျ Lightspeedတို့ TIMI တို့စထှကျထဲကဆော့ခဲ့တာပါ။ Global Version ထှကျလာတဲ့ခြိနျမှာ Global Version ဘကျပွောငျးဆော့ခဲ့တာပါ။
GN: ဒါဆို PUBGM First Generation ကစားသမားထဲ ပါတယျ ပွောရမှာပေါ့။ ဒါဆိုဘယျအခြိနျမှာ Professional ဆော့မယျလို့ စိတျကူးခဲ့တာလဲ?
Ven: မွနျမာပွညျမှာ ပထမဆုံး Local Offlineပှဲ Huawei NYC စလုပျတဲ့ခြိနျပေါ့။ အဲ့ထဲကProfessional ဘကျသှားမယျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ဆော့ခဲ့တာပါ။
GN: In-Game name ကို ဘာအဓိပါယျနဲ့ ပေးခဲ့တာလဲ?
Ven: Ven ဆိုတာက သီးသနျ့အဓိပ်ပာယျထားပွီး ပေးခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။ ငယျငယျက Summer School တှတေကျတော့ English Nickname ကိုယျ့ဘာသာကိုယျပေးလိုကျတာပါ။ 😁😁
GN: Professional ဘဝကို ဘယျအသငျးနဲ့ စတငျခဲ့တာလဲ? ဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့ အသငျးတှအေကွောငျး ပွောပေးပါဦး။
Ven: ကြှနျတျောက PUBG Mobile မပျေါခငျ Battle Royale အမြိုးအစား Mobile Game တဈခုဖွဈတဲ့ Survivor Royale Gameကိုစဆော့ခဲ့တယျ။ အဲ့မှာတော့အပြျောပဲဆော့တာ။ အသိတှစေုဆော့ရငျးName အနောကျမှာ ‘7’ ဆိုတဲ့ နံပါတျလေးတှထေညျ့ဆော့ကွတာ။ အဲ့ကနေ Team7 ဆိုပီး ဖွဈသှားတာ။ အဲ့ကနေ PUBGM ဘကျပွောငျးတော့လဲ Team7ဆိုပီးစထောငျခဲ့တယျ။ Team7ရဲ့ Leader(Founder)အနနေဲ့ပေါ့။ အဲ့ထဲက Professional ပုံစံမြိုးဆော့ခဲ့တာပါ။
Claw Esports Announcement
GN: Team7ကနေ Claw ကို ဘယျလို အခွအေနတှေကွေောငျ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့တာလဲ?
Ven: Team7မှာက ကိုယျတိုငျ ထောငျထားတာဖွဈလို့ ဘာ Background Supporting ဘာမှမရှိဘူး။
Claw ကတော့ Organization တဈခုဖွဈတဲ့အလြောကျ ရှလြေှ့ောကျ ကိုယျဖွဈထှနျးရငျ ဖွဈထှနျးသလို Supporting ပေးနိုငျတာမို့ ClawကိုJoinခဲ့တာပါ။ တခွား Organization တှကေလာချေါတာတော့ရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၄ယောကျလုံးကိုချေါတာမဟုတျတော့ မလိုကျသှားခဲ့ဘူး။ Claw ကတော့ ၄ယောကျလုံးကိုချေါခဲ့တာမို့ Join ခဲ့တာပါ။
GN: Claw မှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခွအေနကေရော Team7 နဲ့ ဘယျလိုကှာခွားမှုတှေ ရှိနလေဲ?
Ven: ဘာမှတော့သိပျမကှာခွားပါဘူး။ ကိုယျ့အသငျးနာမညျပိုတကျလာဖို့ပဲ ပိုကွိုးစားရတာပေါ့။
GN: Claw Esports နဲ့ ပှဲဦးထှကျ Samsung A League မှာရော ဘယျလိုမြိုးအတှအေ့ကွုံသဈတှေ ရရှိနပွေီလဲ?
Ven: ဒီ A Leagueက နညျးနညျးတော့ ပိုပွီး အားစိုကျဆော့ရတာပေါ့နျော။ အသငျးကောငျးတှတေျောတျောမြားမြားပါတယျ။ ပုံမှနျဆော့နကွေပုံစံမြိုးနဲ့မတူပဲ ပွောငျးဆော့ရတာပေါ့။
GN: Claw Esports နဲ့ ဘယျလိုအောငျမွငျမှုမြိုးအထိ အရယူဖို့ မြှျောမှနျးထားလဲ?
Ven: ကြှနျတျောကတော့ SEA Leagueကနေ တဈဆငျ့ SEA Final တှေ Global Final တှအေထိသှားခငျြတယျ။ ဒီမွနျမာနိုငျငံ အတှငျးမှာပဲ ထိပျပိုငျးနားအဆငျ့ရောကျပီးပြျောနလေို့မရဘူးပေါ့။ ကိုယျ့ထကျကောငျးတဲ့ အသငျးတှနေဲ့ယှဉျဆော့ခငျြတယျ။ သူတို့ထကျသာအောငျလညျး ဆော့ခငျြတယျ။
Ven with Team7 at Samsung Galaxy Challenge Tournament
GN: Claw Esports မှာ နညျးပွ (Odin) ရှိနတေော့ သူ့ဆီကနရေော ဘယျလို အကူအညီတှေ ရလဲ?
Ven: ကို Odin ကတော့ သူသိသမြှ Strategy တှေ ဘယျလိုဘယျပုံဆော့ဘာညာပေါ့။ အဲ့တာတှအေပွငျ Mental Advice တှလေဲပေးတယျ။ ဒီပှဲမှာ Fail သှားခဲ့ရငျနောကျပှဲအဆငျပွအေောငျ အားပေးတာပေါ့။
GN: Ven က လကျရှိ In game မှာ ဘာ role ကို တာဝနျယူထားလဲ?
Ven: ကြှနျတျောက ၄ယောကျထဲမှာ Gun Power အနညျးဆုံးဗြ။ 😢 အဲ့တော့ Backup ပိုငျးပဲရတယျ။
GN: PUBGM ထဲက အကွိုကျဆုံး သနေတျကို ပွောပွပေးပါဦး။
Ven: M416နဲ့ Mini ပါခငျဗြာ။
GN: ပွညျပမှာရော အကွိုကျဆုံး PUBGM အသငျးတှရှေိလား? ရှိရငျ ပွောပွပေးပါဦး။
Ven: လကျရှိ Top Esports နဲ့ RRQ Athenaကတော့အကွိုကျဆုံးပဲခငျဗြ။
GN: လကျရှိ Professional Gamer ဘဝမှာ မိဘတှဆေီက ဘာလိုမြိုး Support တှရေလဲ?
Ven: အဖကေတော့ဆုံးသှားတာကွာပါပီ။ အဖရှေိရငျတော့ ပိုပီး Support မယျလို့ထငျတယျ။
Game စဆော့တတျအောငျ အဖပေဲသငျပေးခဲ့တာ။ 😂 ငယျငယျက Family Game လေးတှေ အတူတူ ဆော့တယျ။ အဲ့ကနဘေေးမှာ Game ဆိုငျလာဖှငျ့တော့ P2 Gameတှသှေားဆော့တယျ။ ခိုးပီးဆော့ရငျတော့ အဖကေရိုကျတယျဗြ။😖 အခြိနျနဲ့ဆော့ခိုငျးတာပေါ့လေ။
အမကေတော့အစကပွောတယျ။ Gameရူးရူးနပေီတို့ဘာတို့ပေါ့။ နောကျပိုငျးတော့လဲဘာမှမပွောတော့ဘူး။ UMEC မှာ Championဆုရပီး နောကျပိုငျး အပွဈလဲမမွငျတော့ဘူး။ ဘယျနရောမဆို ထိပျရောကျအောငျ လုပျလို့ပဲပွောတော့တယျ။
Ven with UMEC PUBGM Champion Prize
GN: PUBGM အပွငျတခွား ဘာ ဂိမျးတှဆေော့ဖွဈသေးလဲ?
Ven: Mobile Legends :Bang Bang ဆော့တယျ။ Call Of Dutyနဲ့ PPSPP Game (p1 emu) တှကေို အပြျောဆော့တယျ။ PC Game က အရငျက Dota2ဆော့တယျ။ နောကျပိုငျး ဒီ Mobile Game တှကေ ဘယျနရောမဆို ကောငျးကောငျးဆော့လို့ရတော့ Mobile Game ဘကျပဲဆော့ဖွဈတော့တယျ။
GN: ညီ့ရဲ့ ပရိသတျတှရေော Claw Esports ပရိသတျတှကေိုပါ အမှတျတရစကားလေး တဈခုခု ပွောပေးပါဦး။
Ven: ကြှနျတော့ကို အားပေးနကွေသူတှကေော Teammate တှကေို အားပေးနကွေသူတှကေော Clawကို အားပေးနကွေသူတှကေော အကုနျလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျလို့။ ဆကျလကျပီးအားပေးကွပါ
စိတျမပကျြစရေပါဘူးလို့။ အခုပွိုငျနတေဲ့Samsung A Leagueကော နောကျလာမဲ့ပှဲတှကေိုပါ အကောငျးဆုံးကွိုးစားဆော့ကစားသှားပါမယျလို့ ။❤️
အခုလို အခြိနျပေးပွီး ဖွကွေားပေးခဲ့တဲ့ Ven ကိုရော ခှငျ့ပွုပေးခဲ့တဲ့ Claw Esports ကိုရော Gaming Noodle မှ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ ခငျဗြာ။ လာမယျ့ ပွိုငျပှဲတှမှောလညျး အောငျမွငျမှုတှ ရရှိပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
Claw Esports PUBG Mobile အသင်းခေါင်းဆောင် Ven နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Gaming Noodle ပရိသတ်များအားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။ Gaming Noodle ရဲ့ အစီအစဉ်သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Gamer Highlight” ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်။ Gamer Highlight အစီအစဉ်မှာတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပက နာမည်ကြီး Professional Player တွေ, Coach တွေ, အသင်းပိုင်ရှင်တွေ၊ Caster နဲ့ Streamer တွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ Episode (2) မှာတော့ Claw Esports ရဲ့ PUBG Mobile အသင်းမှ “Ven” နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းသွားမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ PUBG Mobile ဂိမ်း စတင်ထွန်းကားကတည်းက နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေနဲ့သာ ခေါ်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Claw Esports PUBGM ဟာ မကြာသေးမီက Team7 တစ်သင်းလုံးကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတွက် Claw Esports PUBGM ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် အသစ်ဖြစ်တဲ့ “Ven” နဲ့ Gaming Noodle တို့ယခုလို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
GN: မင်္ဂလာပါ Ven ရေ။ ပထမဆုံး ညီ့ရဲ့ နာမည်ရင်းလေး ပြောပြပေးပါဦး။
Ven : ထက်ဦးဝေယံပါခင်ဗျာ။
GN: ညီ့ရဲ့ အသက်ကရော?
GN: လက်ရှိ ပညာရေးကရော ဘယ်အဆင့်ထိ ရောက်နေပြီလဲ? တက္ကသိုလ် တက်နေတုန်းလား?
Ven : ကျွန်တော်လက်ရှိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံ(တတိယနှစ်)တက်ရောက်နေပါတယ်။
GN: PUBG M ကိုဘယ်အချိန်က စတင် ဆော့ကစားခဲ့တာလဲ?
Ven: ဟိုးအရင် Lightspeedတို့ TIMI တို့စထွက်ထဲကဆော့ခဲ့တာပါ။ Global Version ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာ Global Version ဘက်ပြောင်းဆော့ခဲ့တာပါ။
GN: ဒါဆို PUBGM First Generation ကစားသမားထဲ ပါတယ် ပြောရမှာပေါ့။ ဒါဆိုဘယ်အချိန်မှာ Professional ဆော့မယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့တာလဲ?
Ven: မြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံး Local Offlineပွဲ Huawei NYC စလုပ်တဲ့ချိန်ပေါ့။ အဲ့ထဲကProfessional ဘက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဆော့ခဲ့တာပါ။
GN: In-Game name ကို ဘာအဓိပါယ်နဲ့ ပေးခဲ့တာလဲ?
Ven: Ven ဆိုတာက သီးသန့်အဓိပ္ပာယ်ထားပြီး ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ငယ်က Summer School တွေတက်တော့ English Nickname ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပေးလိုက်တာပါ။ 😁😁
GN: Professional ဘဝကို ဘယ်အသင်းနဲ့ စတင်ခဲ့တာလဲ? ဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းတွေအကြောင်း ပြောပေးပါဦး။
Ven: ကျွန်တော်က PUBG Mobile မပေါ်ခင် Battle Royale အမျိုးအစား Mobile Game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Survivor Royale Gameကိုစဆော့ခဲ့တယ်။ အဲ့မှာတော့အပျော်ပဲဆော့တာ။ အသိတွေစုဆော့ရင်းName အနောက်မှာ ‘7’ ဆိုတဲ့ နံပါတ်လေးတွေထည့်ဆော့ကြတာ။ အဲ့ကနေ Team7 ဆိုပီး ဖြစ်သွားတာ။ အဲ့ကနေ PUBGM ဘက်ပြောင်းတော့လဲ Team7ဆိုပီးစထောင်ခဲ့တယ်။ Team7ရဲ့ Leader(Founder)အနေနဲ့ပေါ့။ အဲ့ထဲက Professional ပုံစံမျိုးဆော့ခဲ့တာပါ။
GN: Team7ကနေ Claw ကို ဘယ်လို အခြေအနေတွေကြောင့် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာလဲ?
Ven: Team7မှာက ကိုယ်တိုင် ထောင်ထားတာဖြစ်လို့ ဘာ Background Supporting ဘာမှမရှိဘူး။
Claw ကတော့ Organization တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလျောက် ရှေ့လျှောက် ကိုယ်ဖြစ်ထွန်းရင် ဖြစ်ထွန်းသလို Supporting ပေးနိုင်တာမို့ ClawကိုJoinခဲ့တာပါ။ တခြား Organization တွေကလာခေါ်တာတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၄ယောက်လုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်တော့ မလိုက်သွားခဲ့ဘူး။ Claw ကတော့ ၄ယောက်လုံးကိုခေါ်ခဲ့တာမို့ Join ခဲ့တာပါ။
GN: Claw မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေကရော Team7 နဲ့ ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေ ရှိနေလဲ?
Ven: ဘာမှတော့သိပ်မကွာခြားပါဘူး။ ကိုယ့်အသင်းနာမည်ပိုတက်လာဖို့ပဲ ပိုကြိုးစားရတာပေါ့။
GN: Claw Esports နဲ့ ပွဲဦးထွက် Samsung A League မှာရော ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရရှိနေပြီလဲ?
Ven: ဒီ A Leagueက နည်းနည်းတော့ ပိုပြီး အားစိုက်ဆော့ရတာပေါ့နော်။ အသင်းကောင်းတွေတော်တော်များများပါတယ်။ ပုံမှန်ဆော့နေကြပုံစံမျိုးနဲ့မတူပဲ ပြောင်းဆော့ရတာပေါ့။
GN: Claw Esports နဲ့ ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုမျိုးအထိ အရယူဖို့ မျှော်မှန်းထားလဲ?
Ven: ကျွန်တော်ကတော့ SEA Leagueကနေ တစ်ဆင့် SEA Final တွေ Global Final တွေအထိသွားချင်တယ်။ ဒီမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာပဲ ထိပ်ပိုင်းနားအဆင့်ရောက်ပီးပျော်နေလို့မရဘူးပေါ့။ ကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့ အသင်းတွေနဲ့ယှဉ်ဆော့ချင်တယ်။ သူတို့ထက်သာအောင်လည်း ဆော့ချင်တယ်။
GN: Claw Esports မှာ နည်းပြ (Odin) ရှိနေတော့ သူ့ဆီကနေရော ဘယ်လို အကူအညီတွေ ရလဲ?
Ven: ကို Odin ကတော့ သူသိသမျှ Strategy တွေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆော့ဘာညာပေါ့။ အဲ့တာတွေအပြင် Mental Advice တွေလဲပေးတယ်။ ဒီပွဲမှာ Fail သွားခဲ့ရင်နောက်ပွဲအဆင်ပြေအောင် အားပေးတာပေါ့။
GN: Ven က လက်ရှိ In game မှာ ဘာ role ကို တာဝန်ယူထားလဲ?
Ven: ကျွန်တော်က ၄ယောက်ထဲမှာ Gun Power အနည်းဆုံးဗျ။ 😢 အဲ့တော့ Backup ပိုင်းပဲရတယ်။
GN: PUBGM ထဲက အကြိုက်ဆုံး သေနတ်ကို ပြောပြပေးပါဦး။
Ven: M416နဲ့ Mini ပါခင်ဗျာ။
GN: ပြည်ပမှာရော အကြိုက်ဆုံး PUBGM အသင်းတွေရှိလား? ရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး။
Ven: လက်ရှိ Top Esports နဲ့ RRQ Athenaကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲခင်ဗျ။
GN: လက်ရှိ Professional Gamer ဘဝမှာ မိဘတွေဆီက ဘာလိုမျိုး Support တွေရလဲ?
Ven: အဖေကတော့ဆုံးသွားတာကြာပါပီ။ အဖေရှိရင်တော့ ပိုပီး Support မယ်လို့ထင်တယ်။
Game စဆော့တတ်အောင် အဖေပဲသင်ပေးခဲ့တာ။ 😂 ငယ်ငယ်က Family Game လေးတွေ အတူတူ ဆော့တယ်။ အဲ့ကနေဘေးမှာ Game ဆိုင်လာဖွင့်တော့ P2 Gameတွေသွားဆော့တယ်။ ခိုးပီးဆော့ရင်တော့ အဖေကရိုက်တယ်ဗျ။😖 အချိန်နဲ့ဆော့ခိုင်းတာပေါ့လေ။
အမေကတော့အစကပြောတယ်။ Gameရူးရူးနေပီတို့ဘာတို့ပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့လဲဘာမှမပြောတော့ဘူး။ UMEC မှာ Championဆုရပီး နောက်ပိုင်း အပြစ်လဲမမြင်တော့ဘူး။ ဘယ်နေရာမဆို ထိပ်ရောက်အောင် လုပ်လို့ပဲပြောတော့တယ်။
GN: PUBGM အပြင်တခြား ဘာ ဂိမ်းတွေဆော့ဖြစ်သေးလဲ?
Ven: Mobile Legends :Bang Bang ဆော့တယ်။ Call Of Dutyနဲ့ PPSPP Game (p1 emu) တွေကို အပျော်ဆော့တယ်။ PC Game က အရင်က Dota2ဆော့တယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီ Mobile Game တွေက ဘယ်နေရာမဆို ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတော့ Mobile Game ဘက်ပဲဆော့ဖြစ်တော့တယ်။
GN: ညီ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေရော Claw Esports ပရိသတ်တွေကိုပါ အမှတ်တရစကားလေး တစ်ခုခု ပြောပေးပါဦး။
Ven: ကျွန်တော့ကို အားပေးနေကြသူတွေကော Teammate တွေကို အားပေးနေကြသူတွေကော Clawကို အားပေးနေကြသူတွေကော အကုန်လုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့။ ဆက်လက်ပီးအားပေးကြပါ
စိတ်မပျက်စေရပါဘူးလို့။ အခုပြိုင်နေတဲ့Samsung A Leagueကော နောက်လာမဲ့ပွဲတွေကိုပါ အကောင်းဆုံးကြိုးစားဆော့ကစားသွားပါမယ်လို့ ။❤️
အခုလို အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ Ven ကိုရော ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ Claw Esports ကိုရော Gaming Noodle မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ လာမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း အောင်မြင်မှုတွ ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။